गुलाफको फूल (व्यङ्ग लधुकथा) - Lekhapadhi लघुकथा : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ३० श्रावण २०७८, शनिबार १३:०७ मा प्रकाशित
धेरै बर्ष अघिको कुरा जब कक्षा पाँच देखि अँग्रेजी पढ्ने गरिन्थ्यो!
शिक्षक- “राकेश लौ भन त अंग्रेजीमा गुलाफको फूल लाई के भनिन्छ ?”
राकेशले यता उति हेर्दै सोच्न थल्यो- “मैले अस्ति मात्र याद गरेको थिए” ल कसरि बिर्सिएछु भन्दै झ्यालतिर हेर्यो ! त्यही समयमा अर्को ठुलो कक्षाको एउटा विद्यार्थिले हातले एउटा फक्रिएको फूलको आकार बनाएर विद्यालयको मैदानतिर औल्याएर ईसारा गरेर देखायो । विद्यालयको मैदान भित्र गाई, भैसी, र बाख्राहरू चरिरहेका थिए !
उसलाइ भन्न निक्कै गाह्रो पर्यो, घोडा अलिक नजिकै थियो!
शिक्षकले के भयो राकेश भन्दा झसङ्ग भएर दुइ हातले अनुहार छोपेर भन्यो — “सर घोड़ा …..
शिक्षकले केहि भन्नै नपाई सारा कक्षाका विद्यार्थीहरू खित्का छोड़ेर हाँस्न थाले ।